Nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake? Aitiudza kuti kudii?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake? Aitiudza kuti kudii?
Nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake? Aitiudza kuti kudii?
MaJuda akabata mukadzi muhupombwe vakauya naye kuna Jesu kuti vapihwe mvumo yekumuuraya. Ndizvo zvavakataura. Asi vaive nechimwe chinangwa chakadzama.
JOHANE 8:5 Zvino Mosesi wakatiraira pamurairo kuti vakadaro vatakwe namabwe; zvino imi munoti kudiniko?
Vaiedza kumubata nenzira yakachenjera pamusoro peMurairo.
Kana aibvumirana naMosesi, aive achibvumirana nekuuraya mukadzi uyu. Saka aizova asiri Muchinda weHupenyu. Aizova akundikana hushumiri hwake.
Kana akamurega, aizove asingateveri murairo waMosesi, saka aisazove ari muJuda wechokwadi. Hakuna munhu aizomuterera.
Vaive nechokwadi chekuti apa vaive vamubata muriva rakachenjera.
Havana kuziva kuti vaive vachiedza ndangariro huru kwazvo pazvinhu zvesi zviri paDenga nenyika.
JOHANE 8:6 Vakareva izvozvo, vacimuidza kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho, asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe.
"Sousingavanzwi”: Jesu akaita seaisanzwa zvavaitaura.
Izvi zvaivaudza kuti kudii. Jesu saMwari, aivaudza kuti anoita seasingaoni kana kunzwa vanhu vakazara zvivi.
Saka MaJuda aipomera mukadzi uyu chivi, vaive vakangofanana naye kana kutodarika mukadzi uyu pazvivi zvaaive nazvo.
MaJuda aipomera mukadzi uyu vose vaive vachitadzira Mwari muchivande.
Musiyano mumwechete waive pakati pavo naye ndewekuti ivo vaive vasina kubatwa chete.
MaJuda vaive vasingatereri Murairo waMosesi wese nekuti vaingoda kuranga mukadzi nekuda kwehupombwe, kwete murume aive nemhosva imwechete iyi.
REVITIKO 20:10 "Munhu unoita upombwe nomukadzi womumwe, iye unoita upombwe nomukadzi wowokwake, zvirokwazvo mhombwe nechifeve vose vachaurawa.
Nekuita kunge aisanzwa vanhu vaive nemhosva asi vachituka mukadzi chete, maJuda akaratidza kuti aive nechimwe chinangwa chakavanzika.
Nekupomera mukadzi kwakapusa uku, maJuda vaitoputsa murairo waMosesi ivo pachavo. Vanhu vose vari vaviri vane mhosva vaifanira kurangirwa chivi ichi vose.
Tichiwedzera, Murairo haungotauri pamusoro pemurango chete. Waifanirawo kudzidzisa maJuda kuti vadanane.
REVITIKO 19:18 Usatsiva, kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vokwako, asi unofanira kuda wokwako sezvaunozvida iwe; ndini JEHOVA.
Kuvenga kukuru kwavakamuita iye, kwete murume waaipomba naye, kwaive kusingaratidzi rudo pamusoro pake zvachose. MaJuda aya vaive vasingazozvidi kana ivo vaizopomerwa nenzira yakadaro.
Kupfurikidza kuuraya mukadzi uyu (mucherechedzo wekereke), maJuda airatidzira rudo rwavo rwekuuraya kereke yemaKristu itsva yaigadzirirwa naKristu. Kereke yekutanga yaive yakanyanya kuitwa nemaJuda.
MaJuda aidawo kwazvo kupomera Jesu nekuti aive adzinga vaiita mari muTembere. Zvinhu zvishoma kwazvo zvinoita kuti vatungamiri vezvitendero vatsamwe asi kubvisa nzira yavo yavanoita mari nayo kunovatsamwisa zvakanyanya. Zvitendero zvakagara zviri bhizimisi guru kuvatungamiriri. Saka maJuda vaida kumuteya kuti ataure zvinhu zvisina kunaka.
Chiitiko ichi pakati pake nevaiti vemari muTembere chakaitika pedyo nemavambo ehushumiri hwake.
Jesu, nekunyora muvhu nemunwe wake, aidzokera pakunotarisa panaMosesi paakapihwa gumi reMitemo naMwari.
Mosesi paaive pamusoro pegomo paHorebi (rinonzi zvakare Sinai) maJuda akanamata mhuru yekaitwa nendarama nemutambo wekutamba vakashama waikonzeresa zvivi zvepabonde.
Paive nemahwendefa maviri amabwe. Izvi zvine chirevo chatichataura nezvacho pamberi.
EKSODO 32:25 Zvino Mosesi wakati aona kuti vanhu varasa JEHOVA, (nokuti Aroni wakanga avarasisa, kuti vasekwe navavengi vavo)
Saka maJuda vaive vakashama vachinamata mufananidzo pakagamuchirwa Murairo naMosesi.
Mosesi akatsamwa kwazvo nekuita kwavo zvekuti akakandira mahwendefa amabwe pasi akaparadza pabwe.
Munoda kunditeya nekundipomera neMurairo waMosesi. Mosesi ndiye munhu akatanga kuputsa gumi remutemo. Nei? Nekuda kwehunhu hunonyangadza hwerudzi rwevaJuda.
Saka maJuda vaive muchiitiko chainzwisa tsitsi pavakapihwa Murairo naMosesi.
Saka maJuda pavakauya kuzoedza kumuteya, Jesu akanyora pasi nemunwe wake.
JOHANE 8:6 Vakareva izvozvo, vachimuidza, kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe sousingavanzwi.
Nekunyora nemunwe wake pasi, Jesu aitaura kuti ndiye aive Mwari akambonyora nemunwe wake pamahwendefa amabwe. Asi izvi hazvina kubatsira Mosesi kuti asaputse mahwendefa amabwe aya. MaJuda aive akaoma moyo zvakanyanya. Asi panoputsika dombo, rinofufunyoka roita ivhu. Saka kunyora pasi muvhu, Jesu aisimbisa kuti Mosesi akaparadza gumi remitemo rese. Uye vaishandisa Murairo waMosesi (wakaputswa naMosesi) kuedza kumuteya!
EKSODO 31:18 Zvino wakati apedza kutaura naMozisi pagomo reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanga akanyorwa nomunwe waMwari.
SaMwari, Jesu aive ambonyora gumi remitemo pamabwe. Kwakava kutambisa nguva. MaJuda aive achiri akangowoma moyo nerudo rwekuuraya. Murairo hauna kuvaita vanhu vari nani zvachose.
Zvino Jesu apa akanyora gumi remitemo pasi muvhu. Waizodzimwa nemhepo uye mvura inonaya. Saka ainyora pasina. SeMwanakomana waMwari aisakwanisa kupfavisa moyo yavo ipapo. Aifanira kutanga afa.
Adamu wekutanga, munhu akarurama, akaitwa neguruva renyika akaita chivi akava mutadzi akafa akavigwa muguva muvhu. Adamu wekutanga akarasikirwa nehupenyu hwake akadzokera kuvhu. Adamu wekupedzisira haana kungobuda muguva, asi akagonesawo vamwe kumuka murumuko zvakare. Adamu wekutanga aive nehupenyu asi akarasikirwa nahwo. Adamu wekupedzisira aive mupi wehupenyu.
I VAKORINTE 15:45 Zvakanyorwa vo saizvozvo, zvichinzi: Munhu wokutanga, Adamu, wakaitwa munhu mupenyu; Adamu wokupedzisira wakaitwa mweya, unopa vupenyu.
Saka Adamu wokupedzisira, mumwe Munhu mumwechete akarurama, anonzi Jesu, aifanirwa kufa ovigwa muguva kuti adzose rudzi rwevanhu kubva kumakuva. Jesu ndiye Adamu wekupedzisira. Saka zvinoreva kuti hakuchina umwe munhu akarurama angauye zvakare kumashure kwake.
GENESISI 3:19 Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva.' "
Saka vanhu vakaitwa neguruva.
Nekunyora pasi aishanda nezvinhu zvinoshandiswa kugadzira vanhu.
Nekuyeuchidza maJuda kuti munhu aingova guruva, Jesu ari kuvaudza kuti havafaniri kufunga nezvavo vachizviisa pamusoro-soro.
JOHANE 8:7 Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka, akati kwavari: Usine chivi pakati penyu, ngaatange kukanda ibwe kwaari.
Iyi yaive mhinduro inodakadza.
Murairo pamabwe hauna kubvira wapfavisa moyo yemaJuda.
Murairo waive wakatambiswa pamaJuda. Hauna kubvira wavaita vanhu vari nani.
Saka kunyora Murairo pasi muvhu kwaive kumwe kuita kwenguva pfupi kwaizodzimwa nekukasika uye kwaive kusina zvakwaibatsira muzvikamu zvekupfavisa moyo yemaJuda yaive izere humhondi uye kuipa.
Rudo rwavo rwekutaka mukadzi mutadzi nemabwe rwaingove rwekuvhariridza rudo rwavaive narwo rukuru rwekuuraya Jesu pachake.
JOHANE 5:18 Saka zvino vaJuda vakatsvaka zvikuru kumuvuraya, nokuti wakanga asingaputsi murairo wesabata bedzi, asi wakati vo Mwari ndiBaba vake, achizvienzanisa naMwari
Dai akataura kuti vanokwanisa kumuuraya aizova Messiasi wenhema aive aunza rufu pachinzvimbo chehupenyu. Vaizowana chikonzero chekumuuraya naiyewo. Pamusoro pazvose, Messiasi wenhema aive asina kufanira kurarama zvachose.
Dai akati havakwanisi kumuuraya, aizova achirwisa Murairo waMosesi uye ichi chaivewo chikonzero chakanakisa kuti vamuuraye.
Chero mhinduro yaaipa pamhinduro mbiri idzi vaizomuuraya.
Vaipomera mukadzi kuti vawane chikonzero chekumupomera iye pachake.
Aive apa mhinduro yakanakisa.
Saka nei akaenderera mberi kunonyora zvakare muvhu?
Chikonzero chaive chiri chekuti saMwari, aifanira kunyora rwechipiri mahwendefa amabwe kutsiva aive aputsika.
EKSODO 34:1 Zvino JEHOVA akati kuna Mosesi, "Zvivezere mahwendefa maviri amabwe akafanana nookutanga, kuti ndinyore pamahwendefa mashoko aya akanga ari pamahwendefa okutanga awaputsa.
Ari Mwari, Jesu aive anyora pamabwe ruviri nemunwe wake.
SeMwanakomana waMwari akanyora nemunwe wake kechipiri pasi muvhu.
Jesu aidzokorora kuita zvaakaita muvhu zvaaive amboita pamabwe pekutanga.
Vakanga vaedza kwazvo kupomera mukadzi sechikonzero chekuzogonawo kumupomera iye Jesu.
Asi Jesu akabva asunungura mupomeri mukuru pamusoro pavo -- hana dzavo.
JOHANE 8:9 Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikavarova, vakabuda mumwe-mumwe, kutanga vakuru kusvikira kuno wokupedzisira; Jesu akasara ari oga, nomukadzi wakanga amire pakati pavo.
Munhu aive mukuru wokutanga wacho aive ararama kudarika vamwe vose saka aive aita nguva yekutadza zvakanyanya.
Mukadzi, mucherechedzo wekereke, aive asisina munhu aive amire pakati paJesu naye.
Chiprista cheTestamente Yekare chaive chimire pakati pevanhu naMwari chaive chakundikana zvakazara. Jesu haana waanoda kuti amire pakati pake nechero munhu.
Hakuna chinhu chakadaro sehushumiri hwemabasa mashanu hwakasimudzirwa pakati peungano naMwari.
MuKristu ega ega muprista. MuKristu anomira pakati pevatadzi naMwari.
Asi panongotendeuka mutadzi iyeye achigamuchira Jesu seMuponesi wake, zvino mutadzi akatendeuka anenge avawo muprista.
I PETRO 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuPirisita bwamambo,
Hakuna muprista ari pamusoro pemumwe muprista.
Hakuna muKristu, zvisinei nekuti ane zvipo nematarenda akadii, ari pamusoro peumwe muKristu.
Munhu mumwechete ari pamusoro pemuprista ndiye muPrista mukuru, Jesu Kristu.
VAHEBERU 3:1 Naizvozvo, hama tsvene, vagoverani neni pakudanwa kunobva kudenga, fungai zvakanaka Muapostora noMuPrisita mukuru wokupupura kwedu, iye Jesu Kristu
Imi, semuprista kana kuti muKristu akaponeswa, hakuna munhu anofanira kuva pamusoro penyu kunze kwemuPrista mukuru, Jesu Kristu.
Zvino, tichienderera mberi nezvavaida kuudzwa naJesu.
Kunyora pasi kwaive kutambisa nguva, kusvikira Jesu afa akavigwa pasi pevhu.
Ipapo akazomuka kubva kuvakafa saka aida kuti vanhu vamugamuchire mumoyo yavo.
Mweya Mutsvene unouya kuzogara mumoyo memutadzi anenge atendeuka.
JEREMIA 31:31 "Tarirai, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura JEHOVA, andichaita sungano itsva neimba yaIsiraeri, neimba yaJuda.
JEREMIA 31:32 Haingafanani nesungano yandakaita namadzibaba avo namazuva andakavabata ruoko ndikavabudisa munyika yEgipita, vakaputsa sungano yangu iyo, kunyange ndakanga ndiri murume kwavari ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Mwari aive aprofita kare kuti maJuda aive aputsa sungano yake uye kuti aizoita sungano itsva nevanhu.
JEREMIA 31:33 Asi heyi sungano yandichaita neimba yalsiraeri shure kwamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura JEHOVA, `Ndichaisa murayiro wangu mukati mavo, ndichaunyora pamoyo yavo; ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu.'
Mwari aida kunyora Murairo mumoyo yavo sesungano yemukati, kwete semirairo yekunze inogona kutadza kuteverwa.
Iyi yaive nhanho yetatu.
Murairo wakanyorwa nemunwe waMwari pamabwe wakakundikana. Mabwe anofufunyuka oita ivhu.
Murairo wakanyorwa nemunwe weMwanakomana waMwari muvhu wakakundikana.
Asi guruva revhu ndiro rakashandiswa naMwari kuita moyo yevanhurume nevanhukadzi. Tese takaitwa neguruva.
Saka moyo yedu yevanhu inofanira kuputsika mukutendeuka.
Mahwendefa maviri amabwe aMosesi anomiririra moyo wakaputswa kuita zvidimbu zviviri.
Mweya Mutsvene unogona kuuya chete kuzogara mumoyo wakatendeuka.
Zvino Mweya Mutsvene unobva wanyora murairo waMwari munzvimbo dzakapfava dzemukati memoyo wakaputsika.
Ipapo tinozoterera murairo waMwari kubva parudo rwemukati runotiita kuti tide kuterera Mwari. Kwete nekuti tinonzi timuterere.
Ipapo chete ndipo panozoshanda zano raMwari reruponeso.
EZEKIERI 36:26 Ndichakupaiwo moyo mutsva, nokuisa mukati menyu mweya mutsva; ndichabvisa moyo webwe panyama yenyu, ndikupei moyo wenyama.
Eksodo kana rwendo rwekutanga rwaive naMosesi achitungamirira maJuda kubva muEgipita.
Eksodo yepiri aive Jesu achitungamirira kereke kubuda muchiJuda.
Ipapo kereke yakabva yakurirwa nekunyengera kwemasangano nemakereke nezvitendero nemitemo yawo yakaitwa nevanhu, kuita kwezvematongerwo enyika uye kutenderana nemukuru wekereke, uye madhimoni emari nesimba. Izvi zvakaderedza chiedza kusvikira vatungamiri vemakereke vasisazivi kuti zvakavanzika zvizhinji zveBhaibheri zvinorevei.
Kereke yese yakaponeswa, yakamiririrwa nevasikana vane gumi, vese vakarara zvichibva pamufananidzo wekuna Mateo Chitsauko 25.
Nguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia, kuna Zvakazarurwa Chitsauko 3:14 ina Jesu akamira kunze kwemukova wekereke.
Jesu haasi kugogodza kukereke yese, asi kumunhu mumwe nemumwe ari mukereke.
Jesu haadi kuti tive mukereke tichitevera pfungwa dzevanhu dzisimo muMagwaro apo tinofuratira zvinyorwa zvizhinji muMagwaro nekuti vatungamiri vemakereke havazivi zvazvinoreva kana kuti havazvinzwisisi.
Anoda munhu akazvimiririra kuti anzwisise Magwaro, kunyange akaita munhu mumwechete ari mukereke imomo ari kugona kuita saizvozvo.
Kuna Ruka Jesu akataura kuti aive asingazowane kutenda pakudzoka kwake.
RUKA 18:8 ... Asi kunyange zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Kutenda hakusi kwekungoita. Kutenda kunobva pakutenda Shoko rakanyorwa muMagwaro.
Saka Eksodo kana rwendo rwetatu rwuri kudiwa kuti Mwenga waKristu atungamirirwe kubva mukereke yakatapwa.
“Vanoenda kumakereke” havagoni kudavira mibvunzo mizhinji iri muBhaibheri.
Saka vasingatendi nevanopikisa chiKristu vanoramba vachitaura kuti Bhaibheri rinozvirwisa, uye “vanoenda kumakereke” havagoni kuvadavira.
Zvakaipa kudaro vanoguma vakutenderana navo kuti mune chakakanganiswa muBhaibheri.
Tinofanira kusvika padanho iro Mwenga waKristu anotanga kugona kuverenga Bhaibheri achirinzwisisa, pachinzvimbo chekuudzwa nemapasita asitorinawo chaanoziva kuti hatifaniri kuziva zvakavanzika izvozvo hazvina basa.
Nei Maria akabata tsoka dzaJesu kunze kweBwiro kuna Mateo 28:9, asi kuna Johane 20:17 Jesu anomuudza kuti asamubate?
“Vanoenda kumakereke” vanobva vangotuzura. Varasiswa nevaparidzi vavo uye mapasita avo.
Vaparidzi nemapasita emakereke anhasi vakagona kuchengeta vasikana vane gumi (vanomiririra maKristu akaponeswa, nekuti vasikana vakadzi vakachena) vakarara. Vanoenda kumakereke havachagoni kutsanangura zvinhu zvakakosha zveBhaibheri. Vasingatendi vanobva vaseka zvavo. Vanogarotaura kuti Bhaibheri rakazara zvakakanganiswa. MaKristu (ruregerero, “vanoenda kumakereke”) havagoni kudaira izvi.
Jesu akasiiwa ari ega nemukadzi.
Tinoda Eksodo yechitatu kuti tiburitswe mumakereke matinodekara tichingotenderana nesangano rekereke mune zvarinoita nekutenda mazviri, todzokera pakuva nekuyanana naJesu kunotizarura mesi edu kuchokwadi cheBhaibheri.
“Kufunga kweboka” ndiko kutadza kwakachenjera kwenguva yedu “ndinofanira kutenderana nesangano rekereke”.
Asi kune ndudzi zhinji dzemakereke. Dzese dzakasiyana, asi imwe neimwe ichiti inogona.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose; nokuti haangatauri zvake,
Mweya waMwari unogara matiri unotitungamirira muzvokwadi yese.
Iye oga anogona kutiita kuti tinzwisise Bhaibheri.
Hatizorambi tichitsvaga kufukidzira kusaziva kwedu.
Torai mubvunzo uyu: Adamu naEva vakadya muchero mumwechete. Nei vakawana mirango yakasiyana zvachose?
Eva akadya muchero. Nei Mwari akamuranga nekuzvara mwana? Nei Mwari asina kuti kuna Eva “Zvawaita izvozvo ...”. Haana kubvira atsanangura kwaari zvaakanga akanganisa. Akangomupa murango. Nei?
Mbeu yemhuka yakatukwa ikashandurwa kuitwa nyoka yakakunda sei kurarama mumashure memvura yaNoa? Vana vese vakaberekwa mumashure meMvura yaNoa vaive nemunhu sababa vavo.
Tinoda mutungamiri kuti atungamire Mwenga wenguva yekupedzisira kubva mudziva rekusaziva Bhaibheri rakanyura kereke.
2 Akadanidzira nenzwi guru, achiti: Rawa, Rawa, Babironi, guru, yava nzvimbo inogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nhare yeshiri dzose dzinetsvina dzinovengwa.
Mutumwa ane simba uyu anotiudza kuti tibude muBabironi remakereke, nemirairo yawo yakaitwa nevanhu vanotungamirira vasingatsigiri zvavanotenda mazviri nekuzviyananisa nezvakanyorwa muBhaibheri.
Asi rimwe izwi rinotungamirira Eksodo yekubuda muBabironi. Babironi ndiyo kereke yakawira muzvivi zvemifungo yevanhu.
Izwi iri haribvi kunze kwedu.
Kutsiurwa kwemumoyo kunobva kumweya Mutsvene, unotiudza kuti tibude mukereke yakarasika yenguva yekupedzisira inonzi neBhaibheri ibofu. Haigoni kuona zvinotaurwa neMagwaro.
Haipisi kana kutonhora inotevera chikamu cheMagwaro nechikamu chezvisiri muMagwaro. Chikamu chezvakanyorwa muBhaibheri uye chikamu chekuvimba nezvakataurwa nevanhu. Kwete chinhu ichi kana icho.
Kuzadzwa nemweya weAmerica wekuda kupfuma.
Asi izwi remukati memoyo reMweya Mutsvene riri kutidaidza kuti tibuda kubva mumapoka anotevera zvisimo muMagwaro zvine mbiri, kuti tive nekuyanana naIshe Jesu Kristu neBhaibheri – risina mbiri mumapoka makuru.
Kwete ruwadzano rwekereke kwatinowana kutsigirwa neboka revanhu nevanhu vanovatungamirira.
Kune masangano anodarika 45000 akasiyana siyana emakereke.
Kune mavhezheni anodarika zana emaBhaibheri eChirungu.
Ndiyani anogona kuwana chokwadi musarudzo dzese dziripo idzodzo?
Kune marudzi akawandisa emakereke eMharidzo.
Pakupedzisira kwakanga kwangosara mukadzi naJesu chete.
Eksodo kana rwendo rwechitatu rwatanga kwauri kana uringori nehukama neBhaibheri reKing James Vhezheni, naJesu.
Mweya Mutsvene uri mukati mako uri kuedza kukutungamirira kubva kuruwadzano rwekereke uye kusaziva Bhaibheri kwevaparidzi vemakereke enyu, woita kuti mugone kuverenga nekunzwisisa Bhaibheri.
Munogona kuenda kukereke kwamunoda, chero musina kusungirirwa pakukanganisa kwavo uye kusaziva kwavo Bhaibheri.
Chero kereke yamunopinda mogara mairi haina basa, asi kereke yese iri munguva yeRaodikia ine pakawanda painotadza, zvisinei nekuwanawo zvimwe zvainogona mune zvimwe zvinhu. Saka haipisi kana kutonhora.
Saka munofanira kuziva pamumire neMagwaro. Kwete kuti munotorwa nekutambirwa sei mukereke yamunoenda.
“Chichechi-chechi” hachikuponesei kubva panguva yeKutambudzika kukuru.
Zvese zviri pakati pako naJesu muri vaviri. Hapana mumwe munhu ipapo.
Munogona here kudzokera pakunotenda zvakatendwa nekereke yekutanga chete? Muchitsigira kutenda kwenyu neMagwaro chete.
Jesu anotarisira kuti mugone kunzwisisa zvidimbu zvese zvinosiirirwa zveBhaibheri.
Vasikana vakachenjera vanoti “tinofanira kuziva”.
Vasikana mapenzi vanoti “Tinofanira kuziva here?”.
Kukavara pamusoro pekukosha kwemagwaro. Sezvakaitwa nemhuka yakazotukwa ikaitwa nyoka yakakakavara pamusoro peShoko raMwari. Uye Eva akapusa kwazvokusvika pakukakavarawo pamusoro pekukosha kweShoko raMwari.
Shoko rimwe nerimwe nevhesi rimwe nerimwe riri muBhaibheri rakakosha.
Musatarisire pasi zvinhu zviduku duku.
Mumashure mekupa vanhu zviuru zvishanu chekudya kubva pambuva yemwana mukomana, uye kupa vanhu zviuru zvina chekudya, Jesu akabvunza vadzidzi vake.
Jesu haana kukoshesa zvingwa zvizhinji zvaakasika kuti ape vanhu zviuru zvipfumbamwe chekudya.
Tinofunga kuti izvozvo zvakanakisa. Iye haafungi kudaro. Akanongedzera chinhu chatinowanzofuratira.
Kukosha kwechingwa chakaraswa -- mafufu akanga asara.
“Akasika chikafu chakawandisa” matengu gumi nemaviri, uye matengu manomwe echingwa. Nei?
Kupa vanhu zviuru zvipfumbamwe chekudya chaive chinhu chaive pachena. Vaive nenzara.
Nei akasika chikafu chakawandisa? Nei kwakasara matengu iwayo?
Aitarisira kuti vadzidzi vake vanzwisise.
Kana musinganzwisise, pane chinhu chisina kumira zvakanaka nemaonero enyu amunoita dzidziso dzeMagwaro.
Chisikwa chipenyu chechina pazvisikwa zvakapoteredza chigaro chevushe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 4 igondo rinobhururuka.
Makondo anoona zvakapinza. Anoona chero zvinhu zviduku-duku zvatisingaoni.
Tinoda maonero akadaro emweya kubva kugondo guru remweya iri. Ndicho chivimbiso chakaitwa kukereke chekupedzisira.
Vasingatendi vanoshora Erisha pamusoro pekutuka vana makumi mana nevaviri vakazouraiwa. Mune ruzivo here rwekuti chiitiko ichocho chinomiririrei?
Kana kuti munongosarudza kurara henyu makadekara mumakereke menyu.